Android Nougat bụ aha maka Android N na eze | Androidsis
Android N bụ ugbu a na eze Android Nougat
Anyị anọwo na-eche izu ndị a gara aga maka Google ka emechaa kpebie aha maka gam akporo N. ya kwere na ọ ga-abụ Nutella aha ikpeazụ, ma ọ bụghị ruo taa mgbe anyị nwere ike ịkpọ ụdị ọhụrụ ahụ nke gam akporo nke mechara kpọọ gam akporo Nougat.
Google emeela aha ya dika gam akporo N dika Android Nougat. Ugbu a ọ bụ aha ahụ ka anyị ga-ekwupụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ọ bụla ka anyị mata akụkọ ahụ mgbe ụdị nke ikpeazụ ga-abịa n'oge ọkọchị a. Naanị ihe anyị na-enweghị bụ nke ikpeazụ version nọmba, ma ọ metụtara otu n'ime nri pụrụ iche nke Christmas, the nougat.
Ndị nke Mountain View mgbe ọ bụla ha kpọrọ isi mbipute ha guzobere ihe oyiyi ọhụrụ Gam akporo metụtara. Oge a bụ oge ndụ akwụkwọ ndụ nke android ka ndị ahụ na-atọ ụtọ nougat gbara ya gburugburu ị ga-ahụ n'akụkụ nsụgharị ndị ọzọ nke gam akporo. Ihe na-atọ ọchị bụ na anyị na-eche ihu na mbipute ahụ, na akpụrụ akpụ, nke Google nyere obere ịhụnanya ma ọ bụ, dị ka mmadụ nwere ike ikwu, obere mbọ.
ewebata # AndroidNougat. Daalụ, ụwa, maka echiche aha gị dị ụtọ! #AndroidNkpughe pic.twitter.com/7lIfDBwyBE
- gam akporo (Android) June 30, 2016
Anyị agaghị akatọUgbu a na ha abụbeghị nke mbụ, mana anyị chere na ịkpọrọ gam akporo Nougat anaghị enye ọtụtụ echiche, ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị okike nwere ọgụgụ isi nwere ike ịmepụta ihe akpụrụ akpụ ọzọ na nri a site n'ọtụtụ shuga na calorie. Ọ bụrụ na anyị ga-atụgharị ya na Spanish anyị nwere ike ịkpọ ya gam akporo Nougat, yabụ opekata mpe ọ bụ ụdị ọchị ka ọ na-ada.
N'ikpeazụ, anyị nwere ike ịchere nke ikpeazu biara site na Android Nougat, nke nwere ike ịbụ na njedebe nke oge okpomọkụ nwere ike ịnọnyere anyị, ebe ọ bụ na ngwaọrụ Nexus abụọ a ga-ahapụ ga-enwe ụdị a. Obere ndidi, dịka anyị kwesịrị ịma aha ahụ, anyị nwekwara ike ịga n'ihu inwe ndidi maka ndị nrụpụta ka ha kesaa ya na otu ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Android N bụ ugbu a na eze Android Nougat
Gbanwee Igbe ahụ, egwuregwu nke kachasị eri ahụ maka gam akporo ị ga-ahụ n'anya